Jereo Ny Fandraisam-pitenenan’i Bektour Iskender Tao amin’ny TED, Mikasika ny ‘Hery Goavan’ny’ Fanaovan-gazetin’ny Tanora Any Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Jereo Ny Fandraisam-pitenenan'i Bektour Iskender Tao amin'ny TED, Mikasika ny ‘Hery Goavan'ny’ Fanaovan-gazetin'ny Tanora Any Kyrgyzstan
Voadika ny 02 Janoary 2017 4:27 GMT
Pikantsarin'i Bektour Iskender nandray fitenenana tao amin'ny fivoriana TED 2015.
Ito ambany ito ny lahatsarin'ny fandraisam-pitenenana tao amin'ny TED nataon'i Bektour Iskender, mpiara-nanorina ny Kloop.kg, fikambanana izay tamin'ny vanimpotoanan'ny vaovao tsy marina sy ny ‘ady amin'ny fampitàm-baovao’, iray amin'ireo tantara tanaty media tena nanainga fanahy izao tontolo izao. Tamin'ireo 21 “mpanova ny tany” nandray fitenenana tamin'ny fivoriana TED 2016 tany Vancouver, Kanadà, ny volana Febroary i Bektour, anisan'ireo tena vitsy izay tsy olompirenena Tandrefana.
Nipoitra tao amin'ny YouTube ilay lahatsary tamin'ny volana Desambra 2016.
Eo antenantenan'ny 15 sy 25 taona ireo mpanao gazetin'ny Kloop, ny ankamaroany nahazo maripahaizana tao amin'ny fianarana media an'ny Kloop. Anatin'ireo tena malaza any amin'ilay firenena Aziatika Afovoany ao Kyrgyzstan ilay vohikalam-baovao.
Miavaka amin'ireo vohikalam-baovao maro eo amn'ny firenena ny Kloop amin'ny alalan'ny firotsahany tsy azo hozongozonina amin'ny tsy fiandaniana. Izy ihany koa no hany vohikalam-baovao lehibe eo anatin'ilay repoblika misy olona enina tapitrisa, izay manandrana matetika ny hamosaka ny kolikoly ao amin'ny firenena amin'ny alalan'ireo tolobarotry ny fanjakana. Amin'ny fanaovana izany, manatanteraka ny anjara asany amin'ny fiarovana ny tombontsoam-bahoaka izy.
Ohatra iray ny lahatsoratra navoaka ny 22 Desambra nitondra ny lohanteny hoe Ahoana no Nandanian'ny Tahirimbolam-Panjakana Ho An'ny Fanorenan-trano 45 Tapitrisa soms (eo amin'ny 650.000 dolara eo) taminà Vohikala Izay Efa Misy. Any ivelan'i Bishkek, renivohitr'i Kyrgyzstan, manodidina ny 100 dolara eo ny vola miditra isam-bolana. Eo amin'ny laharana Faha-123 amin'ireo firenena 168 i Kyrgyzstan amin'ny Tondron'ny Fahitàna Ny Kolikoly vao haingana indrindra nataon'ny Transparency International.
Vao haingana, nanome fanehoana an-dahatsary sy an-tsoratra, izay nozaraina maneran-tany, ny Kloop, mikasika ny zava-misy mahatsiravina ao amin'ireo ivon-toerana fisavana pasipaoro ao amin'ny firenena, izay nahitàna vahiny avy amin'ny firenena am-polony nasaina nisoratra anarana tampoka tao anatin'ny dimy andro taorian'ny niampitany ireo sisintanin'ny firenena, noho ny lalàna izay lany tamin'ny volana Novambra.
Nozaraina be tao amin'ny media sosialy ilay tantara, indrindra fa avy tamin'ireo olompirenena teo an-toerana izay miahiahy hoe mety ho kapoka mafy ho an'ny indostrian'ny fizahantany vao manomboky ny firenena ilay lalàna vaovao. Tao anatin'ny herinandro vitsy monja, nofoanan'ny parlemanta ilay lalànan'ny fisoratana anarana ary nitarina tamin'ny lalàna vaovao ny isan'ireo firenena izay afaka mipetraka ela eo amin'ny firenena ireo olompireneny.
Amin'ny teny Rosiana ny vohikala fototry ny Kloop.kg, izay mbola mijanona ho fiteny fampiasa be any Bishkek izay tena ambony tokoa ny tahan'ny fampiasana Aterineto, fa avadika amin'ny fitenim-pirenena Kyrgyz avy eo ireo lahatsoratra, ary amin'ny fitenin'ireo Ozbek vitsy an'isa.
Tamin'ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fivoriana TED tany Vancouver, nohazavain'i Iskender ny fipoiran'ny Kloop nandritra ny fitondran'ny fianakaviana Bakiyev izay mpanao jadona, ny fanehoany ny revôlisiôna izay nanimba ireo Bakiyevs tamin'ny taona 2010 ary ny fihitaran'ny fikambanana taorian'ny fotoanan'ny revôlisiôna.
Iray amin'ireo hany media Kyrgyz mba maneho matetika ny fanohintohinana ireo zon'ny vondrom-piarahamonina LGBT eo amin'ny firenena ihany koa ny Kloop.kg. Vao avy nandray fitenenana tamin'ny TED izy, tonga dia nandefa izao tao amin'ny Facebook i Iskender:
Izaho no faharoa niteny tao amin'ny TED androany maraina. Andrew Pelling no voalohany, ary raha nampiseho ny zavatra mahagaga nataony momba ny biohacking izy, izaho kosa niandry tao amin'ny lalantsara, niandry ny anjarako.
Nanapaka hevitra ny hisotro rano aho, naka ny tavoahangy, ary… nanary ny rano teo amin'ny akanjo amboniko aho, ka nahatonga tasy mainty roa tazana be tamin'io!
Tena feno fisaorana ireo namana ekipa mpanampin'ny TED aho, izay nitondra ahy tao amin'ny efitra fanaingoana tarehy, izay nanamainan'i Meaghan mahafinaritra haingana ny akanjoko tamin'ny fanamainana volo ka nahafahako niverina tany an-dalatsara nihaino an'i Andrew namarana ny fandraisam-pitenenany naharitra 4 minitra!
Ary tsy tsaroako hoe nanao ahoana ny fandehan'ny fandraisam-pitenenako, fa hoy ny olona hoe nety tsara ilay izy. Sahala amin'ny ao anaty nofy ilay izy, ary tena tsy tsaroako mihitsy hoe ahoana ny fisehony tao.
Nanao ny tady kely miloko avana aho raha niteny. Kely tokoa io mba tsy hanelingelina ny olona amin'ny fandraisam-pitenenako, fa lehibe tokoa ka voamarik'ireo olona mandray azy io ho zava-dehibe.
Andranndraiko hoe raha havoaka io fandraisam-pitenenako io, mety ho lasa olompirenen'i Kyrgyzstan be mpijery indrindra teo amin'ny tantaran'ny YouTube aho. Ary te-hampiasa io aho mba handefa ny hafatra fanohanako ny vondrom–piarahamonina LGBT ao Kyrgyzstan ary ho an'ireo olona rehetra izay miady manohitra ilay lalàna tsy misy dikany “fampielezankevitra manenjika lahy tia lahy” , izay efa nandalo famakiana indroa tao amin'ny parliemanta Kyrgyz.
Tsy misy toerana ho an'ny lalàna mitovy amin'ny an'ny Nazi ao amin'ny fireneko. Tsy tokony ho laniana mihitsy io lalàna io, tokony ariana any amin'ny fako io ary tsy tsaroana mandrakizay.
Te-hiteny amin'ireo lahy tia lahy, vavy tia vavy, olona tia lahy sy vavy, sy ireo nanova fananahana ao Kyrgyzstan, ary ihany koa ireo olona izay miady ho an'ny zon'olombelona, hoe hampiasa ny lazako rehetra sy ireo fahafantarako olona aho mba hanampiana anareo araka izay tratrako.
Ataontsika mandeha amin'ny rariny ny firenentsika, mahafinaritra ary miroborobo. Aza matahotra na inona na inona!
Ary mazava ho azy, feno fankasitrahana ireo rehetra nanao izay hahatontosa io fandraisam-pitenenana tao amin'ny TED io aho. Misy olona maro tafiditra amin'io, ka mila lahatsoratra hafa mihitsy aho mba hanononana ny anaran'izy ireo!
Tiako daholo ianareo!